wax ka ogow Uber iyo Aasaasaheeda – Somali Paper
Milly, Ayga ugu yar adduunka
Shaarubaha ugu dheer Adduunka
MAXAA DHACAYA HADII LA FURO ALBAABKA DIYAARADA IYADA OO HAWADA KU JIRTA?
Waxay Ashkato Ka gudbisay ninkeeda , Laakiin Sababta Ma rumaysan kartid!
Nin xaaskiisa furay kadib markii uu arkay sawirkan
Maxaa ku dhacay nin barkaday taleefankiisa oo dab ku jiray
Hadal yar iyo hogo tusaalayn
Macnaha midig iyo bidix qaamuuska siyaasada
Booqashadaydii Kuala lumpur
Hooyo ku umushay diyaarad gudaheed
SIDEE CARUURTEENA BEENTA UGA JOOJIN KARNAA?
Ku barbaari ilmahaaga inuu sirta qariyo
Internetku waxa uu halis galiyaa maskaxda caruurta
Caqliga Fayow Waxa uu Ku Jiraa Jidhka Fayow
Cudurka Shuban Biyoodka (Cholera)
Saamaynta Ciyaalka ee Daawashada Telefeeshinka
Astaamaha digniinta ah ee xanuunka HIV
Faa’idooyinka ay timirtu leedahay
8 Cunto oo caqligaaga hoos u dhigaya!
Su’aasha ugu Adag in La Waydiiyo Qofka Shaqa-Doonka ah Ee u Baahan Taxadarka Dheeriga ah
Arrimahan hadii aad samayso waxaad dib u dhigi kartaa gabawga wajigaaga
9 calaamadood oo si fudud lagu aqoonsado gabadha madaxa banaan
Arrimaha caqabada ku ah nagaashaha guurka
Maxay dumarku u jecelyihiin habsiinta
Sidee loo doortaa nooca laptop ee kugu haboon
Guri Machine 3D lagu daabacay!
Laptop la duubi karo sida salliga
Nooc cusub oo gaadiid ah
5 qalab iyo adeegyo tiknoolajiyadeed oo la saadaalinayay inay guul-darraystaan laakiin gudbay
5 kooras oo aad dhamayn karto todobaadkan
Magacyada shirkadaha ugu fiican ee soo saara laptopyada
Gabadh Da’ yar oo Aasaastay Shirkad Ku Fadhida Qiima Gaadhaya $1 Bilyan oo Doolar
Dukaan aan shaqaale lahayn oo is iibiniya!
Mark Zuckerberg ayaa ugu deeqay waxbarasho 400 arday oo aan sharci lahayn
20 mareeg Internet oo arday walba anfacaysa
8 Waddan oo waxbarashada heerka jaamacadeed tahay 100% lacag la’aan
Hadii aad arrimahan ka cabatid maskax wayn ayaa ku saaran
Dadka caanka ah waxay noolaadaan waqti dheer
Sidee ayaa Lacag Looga sameeyaa Baraha Bulshada?
Stephen Hawking : Shakhsigii Xayiray Maanka Dhakhaatiirta iyo Culumada Sayniska
wax ka ogow Uber iyo Aasaasaheeda
10 qalab oo loo adeegsan jiray jirdilka waagii hore
Sidee ku ogaan kartaa in xaaskaagu ku jeceshahay?
Astaamaha lagu garto qofka jacaylku hayo
Talooyin ku aadan qaabka loola dhaqmo caruurta xilliga qaan gaarka.
Qalinkii Mohamed Ali Bihi
Waxaa la daabacay February 24, 2018
1 daqiiqo ku akhri
Waxaa kaa xiga inaad taabato badhanka telefoonka dabeeto waxaa goobta aad joogto iyo weliba wakhtiga aad rabto kuu imanaya Tagsi kuu qaada meesha aad u socoto. tani waa arin ay ku Dheehan tahay hal abuurnimo iyo fikrad aad loola ashqaraaro.
Hadaba qofka ay fikradaasi ka soo maaxatay waa Travis Kalanick, oo ah aasaasaha shirkada Tagaasida ee Uber.
Fikradu waxa ay ku soo dhacday 2008 isaga oo shir kaga Qaybgalaya magaalada Paris , markii uu shirka ka soo baxay uu u jihaystay albaabka laga baxo si uu u helo Tagsi,balse Wakhti badan ay ku qaadatay inuu helo.
Uber in kasta ay gaadhay fikta sare oo ay noqotay Shirkadaha kuwooda ugu guusha badan , hadana sidii uu Travis, jeclaa wax kasta uma dhicin.
Waxa la soo darisay caqabado iyo dacwado badan oo la xidhiidha dhinaca qaanuunka . Arintaasi Waxa ay ka cadhaysiisay saamilayda shirkada oo ku khasbay Travis, in uu iska casilo maamulka Shirkada .
Haatan waxa shirkada Uber saamiyo ka iibsaday shirkadaha waaweyn ee dalka jabaan oo ku bixinaya Qiyaastii 8 bilyan oo doolar Travis, waxa uu noqday nin bilyaneer.
SoftBanka ayaa 15% qaadanaysa saamiga shirkada Uber , sida uu dhigayo heshiis ay wada Gaadheen labada dhinac ,waxaa kale oo ay laba qof ku yeelanayaa gudiga go’aangaadhista ee Uber.
Uber waxa ay leedahay waxyaabo u suuragelinaya qofka in uu la socd. sida in uu arki karo Masaafada uu Tagsigu u soo jiro , daqiiqadaha uu ku imanayo, halka uu geynayo , magaca iyo sawirka wadaha iyo weliba taarikada gaadhiga . macluumaadkaas oo dhan ayaa dadka ka caawinaya dhinaca Badbaadada.
Travis, oo la ogyahay mashaakiladii iyo muranadii uu ka soo maray ganacsiga ayaa maalgelintan u Adeegsan doona balaadhinta shirkada.
Uber ayaa ku tala jirta in ay isku balaadhiso magaalooyin badan oo ka tirsan aduunka si ay u xoojiso Aasaaskeeda iyo weliba macaashkeeda.
Xigasho: wakaaladaha wararka Caalamka
Faallo ka bixi qormadan
Ku faafi qormadan Facebook
Ku faafi qormadan Twitter
Ku faafi qormadan Google+
Ku faafi qormadan Reddit
Ku faafi qormadan Pinterest
Ku faafi qormadan Linkedin
Ku faafi qormadan Tumblr
Qormooyin la xiriira Dhaqaale
Soo daadi qormooyin la xiriira Dhaqaale
Qormadan faallooyinka waa laga xiray.
© Copyright 2016-17, Somali Paper All Rights Reserved
I WAR GELI
DHISME AYAA KU SOCDA BOGGAN
Raadiyaha Somali Paper dhawaan ayuu bilaabi doonaa barnaamijyadiisa, Hadii aad jeceshahay inaad ogaato marka uu soo galo hawada, Fadlan geli Email-kaaga halkan
Hadii aad jeceshahay inaad ogaato marka uu soo galo hawada, Fadlan geli Email-kaaga
Daawo Qaabka Buug looga soo dajiyo maktabadan